10 Great Apps in ay dardar Your Android Phone
Qof walba jecel yahay xawaaraha marka ay timaado ka hawlgala taleefannadooda Android. Dhibaato caadi haya inta badan isticmaala Android waa in taleefanada ay bilaabaan in ay ugu dhaqsaha badan ku hadhi. Miisaaniyadda hoos u telefoonada badan oo Android leeyihiin 1 GB ee RAM, taas oo aan wax badan marka ay timaado taabato hawlaha kala duwan.
Sidaas, sidee baad u dhaqmaysaa?
Si looga ilaaliyo in aad Android caafimaad oo deg deg ah, waa in aad gashato utility dhinac saddexaad wanaagsan. Software utility waa in ay awoodaan in ay nadiifiso khasnado, cookies, RAM iyo faylasha loo baahnayn. Arrimahaan waa kuwo sahal hagaajin kartaa xawaaraha aad android ilaa xad weyn. Halkan waxa ku jira 10ka barnaamijyadooda si loo dedejiyo aad Android:
1. Nadiifi Master
Waa mid ka mid ah software ugu kalsoon tahay ee lagu iibiyo suuqa Google. Waxay kaa caawinaysaa in dardar iyo nadiifiso aad telefoonka. Waxaa intaa dheer, waxa ay ilaalin waqtiga dhabta ah.
Dedejisaa, nadiifin, iyo ka ilaaliya telefoonka kula engine antivirus.
Tilmaamo gaar ah sida AppLock, Faydi nuqul, iyo nadiifinta qashinka ah.
Waxa kale oo uu qaboobo karaa processor iyadoo la yaraynayo barnaamijyadooda asalka.
Wuxuu ka caawiyaa kor loogu qaado xawaaraha ciyaarta ay 30 boqolkiiba.
Ilaaliyaa ogaysiinaya arrimaha.
Socodsiinayaa users ah tiro ka mid ah waxyaabaha users laga yaabaa in aanay u baahan tahay. Haddii overdoing dhibaato, nadiifi Master ka dhigaysa mid.
2. Kaaliyaha u Android
Waa mid ka mid ah software ugu awooda badan ee lagu iibiyo suuqa maanta. Waxay leedahay qalab maamulka weyn si loo hagaajiyo wax-qabadka ee telefoonka.
Waxaa jira ku dhawaad ​​18 muuqaalada
Waxa kormeera xaaladda SPU, RAM, ROM, kaarka SD iyo Battery.
Ku siineysaa kantarool badan oo shaqooyin dhowr ah sida baado xoog, tababaraha file, uninstall Dufcaddii iyo qaar badan.
Ilaaliyaa socda ee asalka ah in saamaynta batari
Xayeysiis dhibsado hor joogsan kara navigation ah.
Tani app anfacaya sidoo kale waa fiican ee kuwa kuwaas oo raadinaya in uu sii kordhiyo khibradda music. Sida magacaba ka muuqata, waa aragti haddii aad rabto in aad kor loogu qaado tayada saldhig codka. Waxaa u shaqeeya iPad iyo iPhone oo ah mid ka mid ah kuwa ugu caansan.
Baarta oo khasnado, cookies, abuse, files aan loo baahnayn, iyo app aan la isticmaalin qasabadaha yar
Mid ka mid ah click boost feature
Waxay ka dhigi kartaa iibsiga faylka la sahlan computer
Fiiro gaar ah oo badan oo ku saabsan horumarinta waxqabadka, sidaa darteed ma qaababka badan utility.
No xaaladda waqtiga dhabta ah la socodka.
4. buustarka ee Android
App waa ku weyn yahay danayste, iyo keydinta awood. Software dheggan iyo gebi ahaanba xayeysiis lacag la'aanta ah oo leh waxyaabo gaar ah sida xiritaanka automatic ah barnaamijyadooda asalka, iyo qaar badan oo.
Navigation waa u fududahay.
Si dhakhso ah oo soo bandhigtay xusuusta iyo Sarre telefoonada.
Ogaadaa xaalada batariga ee waqtiga dhabta ah iyo sidoo kale markii ugu isticmaalka kaas oo kuu ogolaanaya in aad si aad xoojiya nolosha batari telefoonka ee.
No plugins xayaysiinta.
Waxaa si joogto ah la socodsiinayaa in aad si ay u fuliyaan ayna ka.
5. Avg ee nadiifiye iyo baado batari
Avg ee loo yaqaan brand in software utility qalab. Waxaa la abuuro meel dheeraad ah, batari badbaadiyo, la yareeyo isticmaalka xogta, iyo waddaa si toos ah. Waxaa intaa dheer, waxa ay bixisaa xaaladda waqtiga dhabta ah ee aad telefoonka.
Waxa ay dhammaan hawlaha la xidhiidha waxqabadka horumarinta.
Waxaa si toos ah Daahiriyo aad telefoon ku saleysan joogto ah.
Waa mid ka mid stop oo dhan baahida utility.
Waa ay fududahay in la isticmaalo iyo siinaysaa awood badan ku data aad nadiif ah.
No doorasho saarida u Chine gaar ah.
Cuna batari dheeraad ah.
6. Memory buusterka
App Tani waa ka badan diiradda lagu horumarinayo xawaaraha aad qalab android by xalinta arrimaha xasuusta. Xasuusta suubis idin tusin xaaladda xusuusta reer telefoonka waqtiga dhabta ah.
Isticmaalka RAM markii Real
Nadiifinta Cache, dilaaga hawsha, auto boost iyo nidaamka info waa qaababka ugu muhiimsan waxaa ka mid ah.
Hal-tuubada boost deg deg ah.
Waxaad sameyn kartaa auto boost bareeg, oo marinka
Waxa muuqata in yar oo heer hoose ah
Ka maqan qaababka maareynta app.
Coobbi 7. 1-Tubada
App Daahiriyo khasnado oo dhan, taariikhda raadinta, iyo Guda kala duwan. Isticmaalka software tan, waxaad awoodi doontaa in aad hesho meel bannaan oo dheeraad ah oo ku saabsan qalab aad.
Afar ka mid ah lagu nadiifiyo waa sida nadiifiye khasnado, nadiifiye taariikhda, wac / qoraalka nadiifsan log oo la bixin kari nadiifsan.
Baarta oo files kaydin doono, files xogta, iyo diiwaanka taariikhda raadinta.
Waxaa jira qaababka badan oo aad ka faaiidaysan karaan.
Ma aha lacag la'aan ah
Design waa heer hoose ah.
8. du Speed ​​buusterka
Waa app ah ee optimizes iyo nadiifin. Waxaa sidoo kale waxa uu dhisay-in feature antivirus. Waxaa safaysaa khasnado iyo macluumaad kale oo junk, dila hawsha, iyo Sarre RAM.
Waxaa ka mid ah nadiifsan, suubis ah oo antivirus.
Pre-dhigay nadiifinta automatic ah ee files junk.
Waxaa kor u qaadi kara xawaaraha ilaa 60 boqolkiiba.
Waxay si fiican u ogaan karaa virus iyo qoriga
Waxaa bulaacada boqolkiiba batari 20 dhakhso
Piriform loo yaqaan shirkad in la abuuro PC iyo Mac nadiifinta software. App Tani ayaa sidoo kale sameeya shaqo la mid ah wax ku ool ah ee nadiifinta qashinka, hagaajinaysa xawaaraha, la socodka nidaamka iyo Author si ammaan ah.
Daahiriyo khasnado, taariikhda browser, folder download, sabuurad iyo qaar badan.
Tirtirtaa abuse sida call oo SMS in badan ama shaqsi.
Uninstall badan barnaamijyadooda la rabin.
No feature nadiifinta virus
Nadiifinta loo qabtay maqan yahay.
Buusterka 10. Cleaner- Master Speed
App waa weyn yahay haddii aad raadinayso qaar ka mid ah muuqaalada baytari badbaadinayo wanaagsan. Waxaa kaloo kordhisaa xawaaraha fudayd. Waxaa nadiifin kartaa xasuusta, junk, xawaare boost ciyaarta, iyo qaar badan oo.
Wuxuu xambaarsan oo dhan muuqaalada aasaasiga ah ee nadiifiye ah, iyo sii xoojiyaha.
Wanaajinaysaa qaab ciyaaraha
Waxa ay ku siinaysaa maamulka app fiican.
La'yahay mid xiriiri widget
No barnaamijyadooda liiska cad.
Waxaad u baahan tahay si aad u hesho app lagu nadiifin qalab Android aad si degdeg ah oo si fudud. Tani waxay xaqiijin doontaa in aad telefoon u yarayso oo aan hoos iyo aad u isticmaali kartaa habka kaliya aad ku samayseen markii ugu horeysay waxa ay aad iibsaday. More, app midig kaa caawin kartaa inaad si loo kordhiyo wax soo saarka oo wuxuu ku raaxaysan waayo-aragnimo ah ee lahaanshaha taleefan ah Android.
> Resource > Android > 10 Great Apps in ay dardar Your Android Phone